> Resource> Igwefoto> Olee naghachi Photos si Minolta Igwefoto
Biko nyere m aka Naghachi ehichapụ Photos si Minolta Igwefoto
Nna m nyere m a nnọọ agadi Minolta A2 igwefoto dijitalụ m emeela ọtụtụ foto na ya. M na-ezighị ehichapụ ọtụtụ foto site na ya na-ebufe niile o ha ka ha kọmputa m. Ụfọdụ n'ime ehichapụ foto bụ banyere m ememe ngụsị akwụkwọ. Nwere ike onye na-agwa m otú naghachi furu efu foto site na Minolta igwefoto? Biko nye m ụfọdụ aro. Daalụ nke ukwuu.
Wetuo obi! All furu efu foto ndị ka na gị Minolta igwefoto dijitalụ. Ha na-ghọtara dị ka keerughi data tupu a overwritten site ọhụrụ faịlụ na gị igwefoto kaadị ebe nchekwa. Ị dị nnọọ mkpa ịkwụsị iji gị Minolta igwefoto ozugbo, na mgbe ahụ gị nwere ike omume naghachi niile furu efu foto site na igwefoto.
Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac na-enye gị ike ma mfe mgbake technology naghachi foto site na Minolta igwefoto. Ọ Recovers furu efu foto site na Minolta igwefoto fọrọ nke nta niile ndapụta: kpachaara anya ma ọ bụ na mberede nhichapụ, formatting, nrụrụ aka, na-ezighị ezi edinam, usoro njehie ma ọ bụ ọbụna virus agha. Wezụga ya, ọ na-enyere gị naghachi vidiyo na ọdịyo faịlụ site na Minolta igwefoto kwa.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke usoro ihe omume na-amalite Minolta igwefoto foto mgbake ugbu a!
Naghachi Photos si Minolta Igwefoto na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Ị mkpa jikọọ gị Minolta igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị na-agbake furu efu foto site na ya.
Aga m na-amalite na Windows version nke usoro ihe omume. Ọ bụrụ na ị a Mac nwe, ị pụrụ ịgbaso nduzi naghachi photos na Mac version kwa.
Nzọụkwụ 1 Mgbe wụnye na-agba ọsọ Wondershare Photo Recovery, ị ga-ahụ ihe interface dị ka ndị na. Ị nwere ike pịa "Ekem" na-amalite Minolta igwefoto foto mgbake.
Nzọụkwụ 2 Mgbe ahụ ngwa ga-ịchọpụta na-egosi niile partitions / draịva na kọmputa gị. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu maka gị Minolta igwefoto na pịa "iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu furu efu photos.
Nzọụkwụ 3 A nzọụkwụ, ị nwere ike naghachi foto site na Minolta igwefoto. Niile hụrụ oyiyi na ndị ọzọ faịlụ ga-egosipụta na windo mgbe scanning, na i nwere ike ihuchalu photos elele ma gị furu efu photos nwere ike natara ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ furu efu photos na pịa "Naghachi" button ke window na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Iji gbochie hụrụ oyiyi si na-overwritten, biko ghara idebe ha azụ gị Minolta igwefoto ozugbo mgbe mgbake usoro.
Olee otú Naghachi Videos si Canon Vixia camcorder